bilaogy fanatanjahantena malaza
Politika momba ny fiainana manokana sy ny cookies
Rahoviana no hiverina amin'ny fanatanjahantena aorian'ny fandidiana gallbladder?
Sokajy: ekipa 0
Rahoviana ny hanohy ny fanatanjahantena aorian'ny fanesorana ny gallbladder? Ny fanatanjahan-tena mahery vaika kokoa na ny fanazaran-tena dia tsy omena alohan'ny 15 andro aorian'ny fandidiana. Ny fanarenana dia tokony ho...
Ahoana ny famerenana ny fanatanjahantena rehefa afaka 5 taona?
Ahoana ny fomba hanohizana ny fanatanjahantena aorian'ny 5 taona nijanonana? Ny famerenana ny hetsika ara-panatanjahantena dia tsy maintsy mivoatra: ilaina ny manomboka amin'ny hetsika malefaka (bisikileta, mandeha an-tongotra), eo amin'ny…
Ahoana no hanombohana moramora indray ny fanatanjahantena?
Ahoana ny fomba hanohizana ny fanatanjahantena nefa tsy handratra ny tenanao? Ny fanaovana fanapahan-kevitra tsara sy ny fanohizana ny hetsika ara-panatanjahantena dia zavatra tsara. Fa ny fitazonana ny hafainganam-pandeha dia...
Ahoana ny fomba hanohizana ny fanatanjahantena aorian'ny volana maromaro nijanonana?
Ahoana no hanohizana ny fanatanjahantena rehefa afaka iray volana? Ampiovaovao ny fanazaran-tenanao. Raha mandeha manao gym in-3 isan-kerinandro ianao, ohatra,…
Fanontaniana: Nahoana no sarotra ny miverina amin'ny fanatanjahan-tena?
Ahoana no hanombohana indray ny fanatanjahantena? Ny famerenana ny hetsika ara-panatanjahantena dia tsy maintsy mivoatra: ilaina ny manomboka amin'ny hetsika malefaka (bisikileta, mandeha an-tongotra), tokony ho 3 ora isaky ny…
Ahoana ny fomba hanohizana ny fanatanjahan-tena rehefa afaka 3 volana?
Ahoana ny fomba fanaovana fanatanjahan-tena tsara? Ho an'ny fikojakojana ara-batana dia azonao atao tsara ny manao fivoriana kely 15 minitra isan'andro. Raha ianao…
Ahoana ny fomba hanohizana ny fanatanjahantena aorian'ny fiatoana lava?
Ahoana ny fomba hanohizana ny fanatanjahan-tena aorian'ny fotoana maharitra tsy mavitrika ara-batana? Ireto misy torohevitra folo hitarihana anao. Manontania tena tsara alohan'ny hanombohanao. … Manao…
Ahoana ny fomba hanohizana ny fanatanjahan-tena rehefa afaka 2 volana?
Ahoana ny fomba hanohizana ny fanatanjahantena rehefa afaka 1 volana? Ohatra, raha mpilalao baolina kitra ianao, aza manomboka mivantana amin'ny lalao (intensity), mandamina fiofanana vitsivitsy…
Ahoana no hisorohana ny fanaintainana aorian'ny fanatanjahan-tena?
Ahoana no tsy hanaintaina aorian'ny fanatanjahan-tena? Torohevitra 7 hisorohana ny fanaintainana aorian'ny fanatanjahan-tena Manafana alohan'ny fampiofanana. … Otra ny hozatrao, aloha sy aorian’ny…
Ahoana no hampitsaharana ny fanaintainana aorian'ny fanatanjahan-tena?
Ahoana no hisorohana ny fanaintainana aorian'ny fanatanjahan-tena? Torohevitra 7 hisorohana ny fanaintainana aorian'ny fanatanjahan-tena Manafana alohan'ny fampiofanana. … Otrao ny hozatrao, alohan’ny…
1 2 ... 2,297 Manaraka
Alan no anarako. Tongasoa eto amin'ny bilaogiko ara-panatanjahantena. Eto ny mpamaky dia hahita ny vaovao ara-panatanjahantena farany, hevitra momba ny fifaninanana, tafatafa amin'ny atleta, tompon-daka eran-tany sy Eoropeana. Baolina kitra, hockey gilasy, basikety ary fiadiana ny ho tompondaka ara-panatanjahantena hafa.
Fanontaniana matetika: Iza no nandresy tamin'ny rugby?
Ahoana ny fandraisana anjara amin'ny Ligy Champions?
Ny valiny tsara indrindra: Ahoana ny fidirana amin'ny toeram-piofanana rugby?
Ahoana no hahatongavana ho mpilalao baolina kitra tsara?
Fanontaniana matetika: Ahoana ny famerenana ny lalao baolina kitra taloha?
Ahoana ny fomba fiasan'ny Hockey Playoff Rankings?
Ahoana no tsy hampitombo fe rehefa manao fanatanjahan-tena?
Contacts | Momba anay | Politika momba ny fiainana manokana sy ny cookies
TANDREMO IREO MPANAO ZO! Ny fitaovana rehetra dia navoaka tao amin'ny tranokala ho an'ny tanjona fampahafantarana sy fanabeazana! Raha mino ianao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona ny fandefasana fitaovana, dia aza hadino ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana dia hesorina ny fitaovanao!